PUBG Mobile ayaa kaalinta koowaad ka gashay qiimeynta dakhliga ciyaaraha moobilka bishii Meey | Wararka IPhone
PUBG Mobile ayaa hogaamisay qiimeynta dakhliga ciyaaraha moobilka bishii Meey
Intii u dhaxaysay Abriil iyo Maarso ee sannadkii hore, labadaba Fortnite sida PUBG Mobilada aaladaha moobaylkaIn kasta oo Fornite uu markii hore ku sameeyay iOS-ka mana ahayn illaa bishii Ogos markii ay timid Android, gacanta ku haysa Samsung Galaxy Note 9. Tan iyo imminka, labada kulanba waxay noqdeen kuwa ugu faa'iidada badan labada iOS iyo Android.
In kasta oo ay waligeedba ahayd Fortnite oo hogaaminayay darajada, waxay umuuqataa in dhibaatooyinka waxqabadka Fornite, labadaba macruufka iyo Android, iyoWaxay sababayaan qax ballaaran oo loo qaadayo PUBG Mobile, dagaal royale ah oo aanad u baahnayn inaad dhisto taasna aad ayey uga macquulsan tahay ciyaarta Ciyaaraha Epic.
Ciyaaraha Epic waligood ma aysan shaacin tirada dadka isticmaala aaladaha mobilada ee Fornite, oo ah wax uu sameeyay Tencent, abuuraha PUBG. Sida laga soo xigtay Tencent, tirada bil kasta isticmaaleyaasha mobilada PUBG waa 100 milyan oo isticmaale, taas oo u oggolaaneysa inay noqoto ciyaarta soo saarta dakhliga ugu badan ee ciyaaraha loogu talagalay barnaamijyada moobiilka.
Sida laga soo xigtay Financial Times, Shirkadda PUBG Mobile waxay soo saartay 146 milyan oo doolar bishii Meey oo keliya. Dhammaan lacagtaas waxaa lagu soo saaray iibsashada ciyaarta, iibsashada taas, sida Fortnite, kaliya waxay saameyn ku yeelaneysaa sharraxaadda ciyaartoyda iyo hubka ay isticmaalaan.
Qeyb muhiim ah oo ka mid ah 146 milyan oo doolar waxay ka timid Shiinaha PUBG, oo loo yaqaan Ciyaarta Nabadda iyo inay ku darsatay 70 ka mid ah 76 milyan. Tencent dhibaatooyin badan ayey la kulantay markay awood u yeelatay inay ku qaybiso PUBG Mobile-ka Shiinaha, taas oo ku qasabtay inay wax ka beddesho xilliga dhimashada astaamaha.
Waxay ku beddeleen PUBG Mobile-ka Shiinaha inay u hoggaansamaan xeerarka adag ee rabshadaha ciyaarta. Hada markaad qof 'disho' waxay ku siinayaan sanduuq bililiqo ah oo ay kuu sagootinayaan runtiina si daacadnimo ah ayey u tahay hilaac ahaan fayoobaanta pic.twitter.com/Q5xkrtM0MA
- Svend Joscelyne @ E3 2019 (@SvendJoscelyne) Waxaa laga yaabaa 8, 2019
Game For Peace waa dhab ahaan ciyaar la mid ah tan PUBG Mobile, halkaas oo farqiga kaliya ee laga helayo xilligan dabeecaddu dhimato. Waqtigaas, halkii laga heli lahaa shaxda astaamaha dhintay oo dhulka jiifa oo muuqanaya dhowr ilbiriqsi, astaamaha ayaa la muujiyay macsalaameynaya qofka tirtiray.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » PUBG Mobile ayaa hogaamisay qiimeynta dakhliga ciyaaraha moobilka bishii Meey